Inwe Nsogbu ịde blọgụ? Mee atụmatụ dika o kwesiri. | Martech Zone
Tuesday, July 26, 2011 Tọzdee, Nọvemba 22, 2012 Jenn Lisak Golding
Dị ka onye na-ede blọgụ nke onwe na nke ọkachamara, enwere m nsogbu ịpịpụta blog post kwa ụbọchị n'ihi ibu ọrụ m na oge ndị ọzọ. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ inwe ihe ịga nke ọma dị ka onye na-ede blọgụ, ma ọ bụ n'onwe ya ma ọ bụ ọkachamara, ị ga-etinye ihe atọ: oge, mkpa. Iji mejupụta nke ọ bụla n'ime ihe ndị a, ọ dị mkpa na ị nwere atụmatụ. Ndị a bụ ndụmọdụ 3 ngwa ngwa iji nyere gị aka ịde blọgụ nke ọma:
1. Mepụta usoro ihe omume.
Kpebie ụbọchị ịchọrọ itinye na blọọgụ gị ma debe ọdịnaya ụbọchị ndị a. Mgbe ndị na-agụ mara mgbe ha ga-atụ anya ọdịnaya, ha ga-enwe ike ịgụ akwụkwọ gị na ụbọchị ndị ahụ. Ọzọkwa, gbalịa biputere ma ọ dịkarịa ala ugboro atọ n’izu. Ọ na-eme ka azụmahịa gị dị elu karịa uche ya, ọ na-enyere aka na SEO, ahia na mmepe mmepe.
2. Mepụta atụmatụ ọdịnaya.
Ọtụtụ oge, nsogbu a na-agba mbọ ịchọpụta ihe ịchọrọ ịde blọgụ banyere ya. Lelee kalịnda gị - ọ bụrụ na ị ga-aga ihe omume dị mkpa n'oge na-adịghị anya, mee atụmatụ ide banyere ya n'echi ya. Inwe atụmatụ nke ihe ị ga-ede banyere ya na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịmechaa ọrụ ịde blọgụ gị maka ụbọchị ahụ.
3. Oge dị mkpa.
Dee ihe kwesiri n’oge ma kwalite ozi gi n’oge n’oge. Ọ bụrụ na ị na-ede banyere isiokwu dị ọkụ, gbaa mbọ hụ na ịkekọrịta mgbe ọ kachasị baa uru site na SEO na ahịa.
Iwere oge iji hazie blọọgụ gị maka ọnwa na-abịa ma ọ bụ izu na-abịa ga-azọpụta gị oge na-adịghị anya. Ma echefula imeziwanye ihe mgbe ọ dị mkpa!
Tags: ịde blọgụụlọ ọrụ ịde blọgụplanatụmatụWriting